Typografia medieval: endritsoratra izay azo ampiasaina amin'ny tetikasanao | Famoronana an-tserasera
Ny typeface medieval, fantatra ihany koa amin'ny endritsoratra gothic, dia iray amin'ireo kanto sy taloha indrindra azonao. Ny fampiasana azy io dia mampihetsi-po ny Moyen Âge, fotoanan'ny knights, trano mimanda ary ady eo amin'ny mpiady mahery.
Ary na dia androany aza isika dia namela an'io fotoana io taloha ela be, amin'ny maha mpamolavola anao dia mety hahita ianao indraindray miaraka amina tetikasa mila an'ity karazana typografia ity. Noho izany, tsy mampaninona anao ny manana loharanom-pahalalana medieval vitsivitsy hahafahanao manolotra tolo-kevitra samihafa amin'ny mpanjifanao, sa tsy izany? Miresaka momba ny typografia medieval.
1 Typografia medieval: inona no niandohany
2 Fototra haitao medieval 13 azonao sintonina
2.2 Cloister mainty
2.3 Anglisy taloha
2.4 Rava ny finoana
2.5 Fianakaviana mainty
2.7 Karazan-tsoratra medieval: Angel Wish
2.10 Karazan-tsoratra medieval: Medici Text
2.13 Karazan-tsoratra medieval: sora-tanana Frax
Typografia medieval: inona no niandohany
Karazan-tsoratra medieval, na endri-tsoratra gothic, Izy io dia noforonina tamin'ny taonjato faha-XNUMX ary ny tanjony dia ny hanoratra ny fiteny gothic, izay ilay nolazain'ny Goths. Ny fiaviany dia hita ao amin'ilay antsoina hoe Codex Argenteus, na amin'ny fandikana azy hoe "Boky Silver na Baiboly." Izany dia nosoratana tamin'ny latina ary nosoratan'i Eveka Ulfilas. Na izany aza, tena fandikan-teny avy amin'ny teny grika avy amin'ny Baiboly tamin'ny taonjato faha-XNUMX ho amin'ny teny gothic.
Raha tsikaritrareo, ny gothic tany am-boalohany dia "azo takarina", satria ny tononkira dia tsy nanana fitaovana be loatra. Misy ihany koa ny litera sasany izay tsy mitovy amin'izay holazainao (ohatra ny g toa ny r; na ny j toa ny g).
Tamin'ny Moyen Âge, ity typeface ity dia nalaina ary nampiasaina ho karazana sary fa manome azy fomba bombastic kokoa.
Fototra haitao medieval 13 azonao sintonina
Koa satria tianay hanan-tsafidy ianao, dia nanao karazana font am-baravarankely maromaro izay mety mahaliana. Ary miovaova. Io tetikasa eo am-pelatananao io dia mety ho sary famantarana, afisy na koa fonon'ny boky, ary toy ny zavatra maro hafa, hisy typeface medieval izay mifanaraka tsara amin'ny tetikasa tsirairay.
Manomboka amin'ny typeface medieval isika izay hisarika ny sainao ho an'ireo firoboroboana ananany. Ary io dia ny gothic tanteraka no endriny. Ankehitriny, tsy maintsy tadidinao fa ny sora-baventy no manana izany endriny miravaka izany; sora-baventy, na dia gothic aza izy ireo dia mihalefaka kokoa.
Amin'ny lafiny iray dia tsara izany, satria afaka mampiasa sora-baventy ianao hisarihana ny saina sy ny takelaka kely mba hahatakatra ny hafatra na hovakiana tsara ny lahatsoratra apetrakao.
Ity karazana loharano medieval ity dia iray amin'ireo malaza indrindra, ary ny ny sora-baventy dia ireo izay manana famolavolana miroborobo kokoa raha ny kely kokoa kosa dia tsotra kokoa.
Amin'ity tranga ity, miaraka amina typeface medieval izay miloka amin'ny tsipika tsara dia ho hitanao izany miseho italiana amin'ny endriny ambany, Fa raha ny sora-baventy dia noforonina tamin'ny fomba somary nahaliana kokoa izy ireo, satria ao anatin'ny sasantsasany amin'ireo litera dia toa misy karazana saina na sary mitovy aminy.
Rava ny finoana
Ity loharano medieval ity dia iray amin'ireo tianay indrindra amin'izany endrika ivelany toa ny zavona vokariny. Mety, ohatra, ho an'ny tantara an-tsehatra Scottish na raha tianao ny hanome ny tetikasa fifandraisana eo amin'ny matoatoa, gothic, antitra ary mistery.
Ho lava ny miresaka momba ny Fianakaviana Mainty. Ary io karazana typie medieval rehetra io dia misy karazany samihafa afaka manampy anao hahita ilay tianao. ny manana mainty tanteraka ianao, miaraka amin'ny alokaloka sasany, misy vokany fanamaivanana (izay maka tahaka ny 3D), sns.
Miaraka amin'ny kapoka matevina dia tonga amin'ny endriny mora takatra i Old. Eny, ny azy ny fisehosehoana dia misy fiatraikany amin'ny tranga ambony sy ambany; ary toa ity farany, amin'ny tranga sasany, dia vita amin'ny lefona na teboka (ohatra ny litera ene).
Karazan-tsoratra medieval: Angel Wish
Io no iray amin'ireo endritsoratra litera medieval ho an'ny fampiasanao manokana fotsiny, midika izany fa tsy azonao atao ny mampiasa azy ireo amin'ny ara-barotra, nefa tsy maninona ny mahafantatra azy. Somary matevina kokoa noho ilay notoroinay avy tamin'ny Olde English izy io, saingy manaraka lamina iray mitovy amin'izany.
Ny endriny dia mikendry ny hanitatra ny litera mba hahatratrarana ny teny mifamatotra.
Amin'ity tranga ity dia manana typeface medieval ianao na ny litera lehibe na ny kely dia samy manana firoboroboana be. Mahatonga azy io ho sarotra ny mamaky amin'ny tranga maro, indrindra miankina amin'ny teny napetrakao. Manoro hevitra anao izahay mba tsy hampiasanao azy amin'ny lahatsoratra be loatra.
Ho an'ny ambiny, tsy misy isalasalana fa tena tsara tarehy izy io.
Iray amin'ireo endrika fahita tamin'ny Moyen Âge tamin'ny fomba iray tena kanto, milamina ary, tsara indrindra, azo vakina, Kardinaly io. Mampiavaka azy ny tsipika iray izay tsara matetika, ary amin'ny antsipiriany kely indrindra (manitatra ny ampahany sasany amin'ny litera sasany (litera lehibe sy litera kely).
Karazan-tsoratra medieval: Medici Text
Raha mitady taratasy misy ny firavahany eo amin'ny faritra ambany amin'ny litera ianao, dia mety ho tonga lafatra ity endritsoratra ity. Raha mijery ianao, ny renivola dia miroborobo be nefa ny ankamaroan'izy ireo dia eo am-pototry ny taratasy, na dia somary mazava kokoa aza ny litera ambany, dia manasarotra ny famakiana ihany koa izy ireo.
Zenda dia a karazana litera antitra mazava, na ny lehibe sy ny lehibe. Na dia izany aza dia manana toetra mampiavaka azy izy ary ny litera kely rehetra dia mazàna manana tsipika diagonal izay mivoaka avy any ambony sy any ambany. Raha ny sora-baventy dia manana endrika eo anelanelan'ny tsipika manify sy matevina izy izay tena kanto. Miezaha hanoratra amin'ny fomba feno ny teny iray manontolo hahitana ny vokany.
Azontsika atao ny milaza fa script ity typeface ity satria mamelana be ny endriny, tsy noho ny voninkazo, fa noho ny antsipiriany. Izany no mahatonga ny famakiana azy ho sarotra be, ary ny taratasin-tokana ihany no anoloranay azy ho azy, angamba asongadinao ny ampahany iray, satria raha apetrakao io dia hisy teny izay tsy mahatakatra na inona na inona satria mifampiteny ny andalana.
Karazan-tsoratra medieval: sora-tanana Frax
Mitady typeface medieval izay toa sora-tanana? Manana an'ity ianao, Frax tanana tsipika tena tsotra izay toa tena namboarin-tanana. Mazava ho azy fa tena tsotra ny litera lehibe sy kely, ka mahatonga azy ireo hamaky tsara (amin'ny sasany mety ho sahirana ianao, indrindra fa ny ele ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » loharanom-baovao » Typografia medieval